Tacsida Nelson Mandela - BBC Somali
7 Disembar 2013
Dowladda Koonfur Africa, ayaa sheegtay in kolonyada aaska Nelson Mandela ay dhexmari doonto waddooyinka caasimadda dalka ee Pretoria muddo sadex maalmood ah oo is xigta todobaadka soo socda si loo ogolaado in dadku ugu tacsiyeeyaan.
Afhayeen u hadlay dowladda ayaa sheegay in laga bilaabo maalinta Jimcaha ah kolonyada aaska ay ka bixi doonto goobta maydku yaallo oo ay hormarayaan dhismayaasha midowga ee magaalada Pretoria, oo maydka madaxwaynaha la dhigi doono.
Dadka u tacsiyaynaya ayaa lagu dhiirigalinayaa in ay waddooyinka hareerahooda sftaan.
Mr Mandela tacsidiisu waxay muddo sideed maalmood ah ka soconayaa gobolka bariga Cape oo uu ku soo koray.
Kumanaan ubaxyo ah ayaa la dhigay bannaanka guriga uu ku lahaa magaalada Johannesburg, halkaas oo uu ku dhintay maalintii Khamiista isagoo shan iyo sagaashan jir ah.